Indlu enkulu yaseFama yase-Elandsrivier
Prince Alfred Hamlet, WC, eMzantsi Afrika
Indlu yefama enesitayile esidala enendawo eninzi kunye nemibono emangalisayo emi kwinduli ejonge ifama yethu yeziqhamo kunye neWam Bokkeveld. Ifanelekile ukujonga ikhephu! Amagumbi okulala amakhulu kunye neendawo zokuzonwabisa eziphangaleleyo. Isitiya esinomthunzi silungele iipikiniki. Isitovu se-Dover kunye neziko ngeentsuku zasebusika ezinekhephu. Zininzi iindlela zokukhwela intaba kunye nebhayisikile onokuzifumanisa. Jonga ukuba iiapilkosi, iiperesi kunye neepesika zivunwa njani kwaye zonwabele iintyatyambo zazo ezintle ngexesha lasentwasahlobo. Indawo yokuhlala engakumbi: https://www.airbnb.com/rooms/13323874?s=51.
Indlu yasefama iya kuziva ngathi likhaya elikude nekhaya elinazo zonke izinto ezibalulekileyo esandleni. Ukwahlukana okuthandekayo kunye neentaba kunye nendalo ekujikelezile. Ikwalungele iintsapho ezinkulu eziya emitshatweni kule ndawo.
Indlu ibekwe ecaleni kwendlu kwaye inokuqeshwa ngokwahlukeneyo okanye kunye nendlu kumaqela amakhulu. https://www.airbnb.com/rooms/13323874?s=51.
Siyabuthanda ubomi basefama ngenxa yeendawo ezivulekileyo kunye neendlela ezininzi zokuhamba. Iimbono kunye nokutshona kwelanga kuhlala kumnandi. Siyakuthanda ukuphumla njengoko kungaphandle kwedolophu kwaye kude nesiphithiphithi. Idolophu imalunga ne-4km ukusuka kwindlu yasefama enezindlu zasefama ezingabamelwane ezikude.
Njengoko sihlala ePaarl asiyi kuhlala sikwazi ukukwamkela buqu, kodwa umphathi angangena aze athi molo. Ndingathanda ukuhlala ndinxibelelana ngefowuni okanye kuWhatsapp kwaye ndiya kuba senkonzweni yakho ngalo lonke ixesha.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Prince Alfred Hamlet